iklabishi Chinese, noma njengoba ukuyibiza, isaladi Chinese, abathandwa abaningi abantu bakithi. Namuhla, abashayeli bamaloli kakhulu sikhule lokhu sitshalo esimangalisayo emasimini abo, futhi ngokusobala awulona ize, ngoba amahlamvu alo ezinkomo oluhlaza esikhundleni ngokuphelele yimuphi salads. Ngaphandle isaladi Chinese kufana nikhukhumele iklabishi, kodwa oblong. Amahlamvu aso ziqoqwa ibe esidayisa enkulu, futhi ngezinye izikhathi ukufinyelela mayelana 50 cm ubude. Umbala kule yemifino zokhahlamba kusuka luhlaza okotshani ukuze ukukhanya yellow.
Flat eshiya iklabishi Chinese namanzi kakhulu futhi esinamanzi, kungenxa ukunambitheka kwabo ngendlela emangalisayo isaladi green ngenkuthalo esetshenziswa labapheki emhlabeni wonke. Uveza kakhulu izitsha lokuqala nelesibili, Ungadla ngisho nama-dessert. ERussia, ukuthi kwande ukuthi kube ukupheka borscht noma kwengezwe salads. Izitsha nge kwalokho zalesi sitshalo kwaveza elicwengisiswe nge iphunga elimnandi. Ngokwe juiciness futhi okuqukethwe izakhi mkhondo nge iklabishi Chinese ngeke kuqhathaniswe imuphi omunye isaladi, futhi khona kuwo yezingxenye amaprotheni cishe amabili izikhathi kunaleyo iklabishi.
isaladi Green Kunconywa izazi eziningi. Ngokusho kwabo, white okuyingxenye iqukethe izingxenye eziwusizo ukuze umzimba wethu. Akukona nje umkhiqizo ukudla, kodwa futhi zokwelapha. Kulabo ahlale edla ukudla, "pekinka" - i yemifino esisemqoka ku imenyu, njengoba 100 amagremu. umkhiqizo has kilojoule 16 kuphela. Kungaba udliwe fresh, iyisitshulu, usawoti kanye pickled indlela, noma ngayiphi ukushintshashintsha ke kugcina yonke impahla yayo ezuzisayo. Ekuphileni kwethu kwansuku zonke namaqabunga oluhlaza hhayi kuphela, kodwa futhi ikhanda, okuyinto obuyigugu amavithamini ukuxosha ukuthi ingxenye kungaba kakhulu kabi belulekwa.
isaladi Chinese. inzuzo
Shono Chinese cabangela lesi sitshalo umthombo zokuba nempilo ende, ngoba iqukethe acid ezibalulekile acid, okuyinto unekhono nihlanze igazi lethu kusuka amaprotheni angaphandle eziyingozi, njengoba lokhu yemifino ngempumelelo kuthuthukisa isimiso somzimba sokuzivikela futhi Kusizuzisa ku pheshana emathunjini. Ngenxa okuqukethwe aphezulu ka-vitamin C, isaladi Chinese Kunconywa ukuba asebenzise ubhubhane lwe imikhuhlane.
Amaqabunga oluhlaza iqukethe nosawoti wamaminerali, 16 amino acid, acid organic, i-lactose, lactucin alkaloid, kanye eziningi amavithamini (A, B1, B2, B6, C, E, PP, K, P, U).
IsiShayina iklabishi Inzuzo main yikhono layo ebusika ukulondoloza yonke spectrum we Vitamin eziyinkimbinkimbi. Leli khono okungavamile iyona nomona izitshalo eziningi. Nokho, Akudingi izimo isitoreji ethize: amahlamvu ngokwanele ukuba bopha lesikwa noma ukubeka esitsheni. Ukudla ngesikhathi ebusika, isaladi Chinese, osinika yona umzimba nge micronutrients ebalulekile, ekuqedeni kwakhe kusukela beriberi kanye yokumatisa amaminerali abalulekile.
Amahlamvu aso amnandi ebekelwa zombala, uwoyela lwesinaphi, ama-enzyme, wax glycosides ezinikeza isaladi obucayi futhi ethize ukunambitheka ehilelekile. Sangena oyiyo vitamin B kanye lysine abe nomphumela oqabulayo ku emathunjini. Ngezinye isilonda isisu kolwelwesi erosive, odokotela kakhulu belulekwa afake ekudleni kwakho iklabishi Chinese, ngobumnene amajazi ulwelwesi lwamafinyila kanye kunomphumela zokwelapha. Thenga isaladi green kungaba kunoma iyiphi hypermarket at an ngentengo eqolo.
Bona ukuthi amaqabunga ayo kwakungafanele wilted futhi ezithambile. Ukuze wenze sigqoka engeza spice kuso ezihlukahlukene nezinongo ezinjenge-ginger, upelepele obomvu, nesweli, citric acid. Ungakwazi ukulungiselela ngayo kwasolwandle nemifino, ngakho isidlo sakho sizothola ukunambitheka ekhethekile futhi iyoba wusizo kakhulu. EChina, isibonelo, mix it ne apula kanye pepper, bese ugcwalisa ngamafutha omnqumo noma cider uviniga. Lokhu isaladi lula kuthokozise kokubili abadala kanye nezingane.
Indlela ukubhaka imifino kuhhavini: ukupheka izimfihlo
Ukupheka ubhontshisi okumnandi e multivarka. iresiphi
Unswinyo Social - Iyini? izibonelo Lesitshalo
Ukhilimu Anti-cellulite kuzokusiza ukuqeda izinkinga lesi sibalo
Yini Amantongomane ewusizo kakhulu, futhi kuba namuphi umphumela zabo ezinhle emzimbeni?
Ezivuvukele, kodwa izinyo akusho ubuhlungu - yini okumele ngiyenze? Ubangela ukuvuvukala izinsini kanye nokwelashwa
Ubani uDajjal ku-Islam?